PSV Eindhoven vs - ဟော်လန် Jupiler လိဂ် | ဘောလုံးခန့်မှန်း
+7/ 9584-983-763အချက်အလက်@s ကိုocဤrbeTSHoot.coမီတာ
ဟော်လန် Jupiler လိဂ်
ပွဲစဉ်ရက်စွဲ: 8 စက်တင်ဘာ 2017 | Posted: 8 စက်တင်ဘာ 03:26 2017 GMT +2| သိမှတ်ဖွယ်ကြည့်ရှုအားပေး 949 ကြိမ်.
PSV Eindhoven vs – ဟော်လန် Jupiler လိဂ်
PSV Eindhoven vs – ဟော်လန် Jupiler လိဂ်, မြှင့်တင်ရေး Eindhoven များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ဟော်လန် Juplier League.One မှအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကရိယာများနှင့်အများအပြားအဖွဲ့များလုပ်ခဲ့တဲ့ league.As အတွက်လူတိုင်းကိုရပ်တန့်နိုင်သူ PSV ၏ဂျုံကစားသမား, well.They Telstar 2-2.The ဂိမ်းရေးဆွဲရန်စီမံခန့်ခွဲအဖြစ် Eindhoven Eindhoven ဆုံးရှုံးပြီးနောက်တစ်ကျော့ပြန်လုပ်နှစ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့အဖြစ်ကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခဲ့ရာသီ၏အစဦး၌တစ်ဦးကမှားခြေလှမ်းလုပ် 0-1 နှင့် 1-2 ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးလွန်းသူတို့သည်နောက်တဖန်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးနှစ်ခုကျည်အတွက်ကံကောင်းသည့် lead.Being ယူပြီးနောက်ရည်မှန်းချက်ကိုလက်ခံရရှိကွာအပေါ် shaky.Against Emmen ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက်အကောင်းဆုံးအသင်းကိုရင်ဆိုင်ရပြီးနောက်တတိယဂိမ်းအတွက်သူတို့ကိုကူညီမပေးခဲ့ပါဘူးခဲ့သည် – NEC, ဒါပေမယ့် Eindhoven သူတို့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုတကယ်အစိုင်အခဲကိုကြည့်ရှုပြု – scoring.NEC ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက်အကောင်းဆုံးအသင်းသာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့အတူအကောင်းဆုံးအိမ်တွင်းအသင်း 21 ဖြောင့်အိမ်မှာအနိုင်ရ(အဆိုပါလိဂ်မှာသူတို့ရဲ့ယခင်ရာသီနဲ့ပေါင်းစပ်)
သို့သော်ငြားလည်း, ဂျုံ PSV လုံးဝပွဲသည်ဤသင်း၏ငယ်ခွက်များကကစားခဲ့ကြောင်းဂျုံ Ajax.No ကိစ္စအားဖြင့်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်, နှစ်ဦးစလုံးသင်း၏ပရိသတ်များကသူတို့ support.To ရိုးသားပြသထံသို့ လာ. အဖြစ်ကသေးအကြီးနှင့်အပြင်းစွာသောအဒါဘီဖြစ်ပါသည်, ဒီပွဲစဉ်ကိုမကြာခဏတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဆုရှင်ရှိပြီးပါကကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ခဲယဉ်းသည်, ဒါပေမဲ့ 0-3 ငါသူတို့ဿုံအနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ဂုဏ်သတင်းပညာတတ်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်အဖြစ်သေချာဘို့ PSV.Today သူတို့၏ယောက်ျားလေးများတစ်ဦးလေးနက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလပ်များ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်.
အလုံးစုံ, နှစ်ဦးစလုံးအသင်း moment.Eindhoven မှာလည်းမတည်ငြိမ်သောကာကွယ်ရေးသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအနိုင်ရရှိရှာဖွေနေကြသည်နှင့် PSV ofter high-အမှတ်ပေးဂိမ်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ယနေ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောရိုက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ rivals.Both အဖွဲ့များဖို့ကြီးမားသောဆုံးရှုံးကျော်လွှားရန်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပေးခြင်းနှင့်အတူများမှာ.
ရိုးမား vs ချယ်လ်ဆီး